Russia inotangazve Armenia neAzerbaijan nendege
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » Russia inotangazve Armenia neAzerbaijan nendege
Airlines • nhandare yendege • Armenia Kupwanya Nhau • avhiyesheni • Azerbaijan Breaking Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • Kutarisirwa • Russia Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Ndege dzenyika mbiri idzi dzinogona kuita nendege mbiri pasvondo kubva kuMoscow kuenda kuBaku uye kana pavhiki kubva kuMoscow kuenda kuYerevan
Ndege kubva kuMoscow kuenda kuYerevan dzinotangazve muna Kukadzi 15
Ndege kubva kuMoscow kuenda kuBaku dzinoenderera zvekare muna Kukadzi 17
Muna Kurume 2020, Russia yakamisa dzese dzekutengesa vafambi vanoenda kunze kwenyika nekuda kwechirwere checoronavirus
Vakuru veRussia vezvemhepo vanozivisa kuti Russian Federation iri kutangazve ndege dzakarongwa neArmenia neAzerbaijan, yakambomiswa nekuda kwechirwere checoronavirus, kutanga nhasi.
Ndege dzenyika mbiri idzi dzinogona kuita nendege mbiri pasvondo kubva kuMoscow kuenda kuBaku uye kana pavhiki kubva kuMoscow kuenda kuYerevan. Russia's Aeroflot yakazivisa hurongwa hwayo hwekuita ndege ina pasvondo kuenda kuYerevan kutanga muna Kukadzi 15, uye nendege mbiri pasvondo kuenda kuBaku, kutanga muna Kukadzi 17.
Parizvino, vashanyi vanobvumidzwa kupinda muArmenia, asi vanofanirwa kuve nePCR bvunzo isina kuitwa anopfuura maawa makumi manomwe nemaviri vasati vasvika.
Kupinda kuAzerbaijan, zvisinei, parizvino yakavharwa kune vashanyi. Vanomiriri chete, vatorwa vane hama dzine chizvarwa cheAzerbaijani, vatorwa vane mvumo yekushanda kana yekugara uye vadzidzi vanobvumidzwa kupinda, asi vanofanirwa kuve nePCR bvunzo isina kuitwa anopfuura maawa makumi mana nemasere vasati vaenda.
Muna Kurume 2020, Russia yakamisa dzese dzekutengesa vafambi vanoenda kunze kwenyika nekuda kwechirwere checoronavirus. MunaGunyana, Russia yakamira kutakura nendege dzekudzosera kumusha. Parizvino, ndege dzinobvumidzwa kuita nendege dzinotakura zvinhu uye dzevapfuuri zvisinei, mitemo yekupinda yevatakuri inosiyana pakati penyika.